Maqaalka Richard Hollis ee Martech Zone |
Maqaallada by Richard Hollis
Xilligan uu joogo, Richard Hollis waa milkiilaha, aasaasaha, iyo agaasimaha guud Holonis Inc., oo fadhigeedu yahay San Diego, California. Isbahaysiga wiilkiisa, Hayden Hollis, labadan nin waxay qaabeeyeen aragti ah abuuritaanka barmaamijkii ganacsi ee warbaahinta bulshada ee ugu horreeyay oo si buuxda isku dhafan, oo lagu saleeyay fahamka iyo mabaadi'da holonnada, fikradda ah in xalku isku mar yahay qayb iyo sidoo kale guud ahaan. Holonis wuxuu awood siiyaa ganacsiyada dhammaan noocyada leh tiknoolajiyad isku dhafan oo madadaalo leh, fudud, oo kharash ku ool ah in la isticmaalo, ujeeddada maskaxda lagu hayo waa in la kharibo oo dib loo bilaabo dhaqaalaha dhammaan isticmaaleyaasha hore ee kacdoonka dhijitaalka ah ee degdegga ah.
Khamiis, May 21, 2015 Axad, Oktoobar 4, 2015 Richard Hollis
Qarniga 21-aad waxaa la arkay soo bixitaanka tiknoolajiyado aad u tiro badan oo awood noo siinaya inaan si guul leh ugu suuq-geynno ganacsiyada qaab isku dhafan oo saameyn leh marka la barbar dhigo xilliyadii hore. Laga soo bilaabo baloogyada, dukaamada e-commerce, suuqyada internetka illaa kanaalada warbaahinta bulshada, shabakadu waxay noqotay goob fagaare ah oo macluumaad loogu talagalay macaamiisha si ay u baaraan oo u cunaan. Markii ugu horreysay, Internetku wuxuu fursado cusub u abuuray ganacsiyada maaddaama aaladaha dijitaalka ah ay gacan ka geysteen hagaajinta iyo otomaatigga